Ibsi 'Manni Maree Baalaadaraa' kennaa ture mormiin isa qunname - BBC News Afaan Oromoo
Ibsi gareen Iskindir Naggaan hoogganamuu fi 'Mana Maree Baalaadaraa' jechuun of waamu kennaa ture osoo hin xumuramin bittiinnaa'e.
Gareen qondaaltota mootummaatiin bu'uura seeraa hin qabu jedhame kuni miseensonni koo hidhamaniiru jedheera.
Mata duree namootni sababa ilaalcha isaanin hidhaman halduree tokko malee yaa hiikkaman jedhun ibsa kennaa kan ture Iskindir Naggaa, dhiibbaan mootummaan 'Mana Maree Baaladaraa' irratti qaqqabsiisaa jiru cimeera jechuun kan hime.
Mootummaan barreessaa olaanaa "mana marichaa" Eliyaas Gabruu fi hogganaa quunnamtii ummataa Sintaayahu Chakkol dabalatee miseensota mana marichaa hedduu hidheera jedha ibsi mana maree kanaa.
Kana malees, bulchaan magaalaa Finfinnee Mootummaa Naannoo Oromiyaa walin ta'un namoonni akka hidhaman waan taasisaniif dhiittaa mirga namoomaa raawwataniiru jechuun aangorraa ka'u qaba jedhe Iskindir.
Ibsi "mana marichaa" erga eegalee naannoo daqiiqaa soddomii torbaatti namootni "gaaffi qabna" jechun wacni eegalamuu isaatinis ibsichi dhaabbateera.
Namoota sagalee isaanii dhageessisan keessaa tokko kan ta'e Muhiddin "ibsi Iskindir kenne kan biyya diigu dha. Tokko xureessanii tokko olkaasuun biyya ijaaruun hin danda'amu" jechuun BBC'tti hime.
Kana malees "Iskindir mootummaa qeequf mirga qabaatullee ejjannoo ummata diigu qabachuu hin qabu. Mootummaanis gochaa ummata qoqqoodu fi walitti buusu kana dhaabsisuu qaba," jechuun hime.
Itoophiyaan nu barbaachisti diiggamuu hin qabdu ummatni yaada biyya ijaaru fi diigu adda baafachuu qabas jedheera.
Dhimmootni magaalaa Finfinnee fi Baahir Daaritti uumaman garaagarummaa ADWUI keessa jiru sababa kan godhatan malee mana maree 'baaladaraa' walin hidhata kan qaban miti kan jedhe Iskindir Naggaa "lammiileen biyyaalee biroo keessa jirtan sagalee keessan dhageesisuu qabdu" jechuun waamicha dhiyeesse.
Baankiin Islaamaa Itoophiyaatti maaliif barbaachise?
"Itoophiyaa keessatti dhaabni yeroo ammaatti gochaa shororkeessummaa raawwachaa jiru hin jiru" kan jedhe Iskindir dhimmi B/J Asaaminaw fa'is qabiyyee siyaasaa akka qabaatu ta'eera jechuun kan dubbate.
Qondaaltonni mootummaa MM Abiy dabalatee gareen kuni bu'uura seeraa hin qabu jechuun adeemsa kana irraa akka of qusatan dubbachuun isaanii ni yaadatama.